ဒီဇင်ဘာလ တတိယပတ် မြန်မာဘာသာ ရေဒီယို - Kantarawaddy Times
ဒီဇင်ဘာလ တတိယပတ် မြန်မာဘာသာ ရေဒီယို
ယခုတစ်ပတ်မှာတော့ ကယန်းနှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားတွေကို အကျဉ်းချုံးကျင်းပပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း၊ လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ပေးတဲ့ကျောင်းကို နိုင်ငံတကာအထောက်အပံ့ရဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတင်ပြသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ “သေနတ်သံမကြားရင် ငြိမ်းချမ်းပြီလား” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးအပြင် ဒီတစ်ပတ်သီချင်းလက်ဆောင် အစီအစဉ်ကနေ တေးရေး- ခွန်းဒေးဗစ်ကို ရေးစပ်ထားပြီး တေးဆို – ခွန်းဒေးဗစ်ကို . ခွန်ကယန်း. ရိုစ့်မေရီလင်း တို့ သီဆိုထားကြတဲ့ “ဆက်ရှင်သန်မယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်တို့ကို ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Next articleကယားပြည်နယ်နေ့တွင် အခမ်းအနားသာကျင်းပမည်ဟု ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြော